Mashruuca Mashruuca Qiimaha Sooran ee Latin America iyo Kariibiyaanka - Geofumadas
Febraayo, 2016 cadastre, Featured, Maamulka Land
Machadka Lincoln ee Siyaasadda Dhulka ayaa ugu baaqaya tabaruceyaasha ka imaanaya dhammaan magaalooyinka Latin America iyo Caribbean inay ka qaybqaataan dhismaha Khariidadda Khariidadda Dhulka ee gobolka. Hawlgalkani wuxuu ka dhici doonaa 8 ee Febraayo ilaa 31 ee Maarso 2016.
In la ogaado habdhaqanka suuqa suuqyada waxay ku haboontahay qeexida sharaxaadda wanaagsan ee magaalooyinka. Sidaa daraadeed, horumarinta bangiga macluumaadka ah ee lagu daba galo oo nidaamsan oo ka mid ah baaxadda gobolka iyo helitaanka bilaashka ah ayaa noqon doona aalad muhiim u ah qorsheeyayaasha magaalada.
"5 xogta magaaladaada!" Ka qaybqaadashada barnaamijkan waa sahlan. Waxay u baahan tahay oo keliya inaad bixiso xogta 5 ama wax ka badan qiimaha dhulka ee magaaladaada oo aad iska diiwaangelisid isticmaale ahaan khariidada GIS ee shabakadda si aad ugu hesho khariidada.
Ka qaybqaadashadu waa bilaash oo bilaash ah. Waxaa loogu talagalay xirfadlayaasha, tacliinta iyo saraakiisha dawladda ee ku xiran siyaasadaha dhulka ee magaalooyinka. Tabaruciintu waxay u muuqanayaan inay yihiin kuwo aan qarsoodi ahayn labadaba bogga mashruuca iyo warbixinta ugu dambeysa ee daraasadda.
Waqtigan xaadirka ah waa mashruuc la qorsheeyay oo loola jeeda Mario Piumetto iyo Diego Erba, oo kaashanaya Barnaamijka Latin America iyo Caribbean ee Machadka Lincoln. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mashruuca iyo sida looga qaybgalo, fadlan la tasho Valor Suelo América Latina.
Suuqyada dhulka ayaa si wayn u saameeya horumarinta magaalooyinka, waxaa ku yaal muhiimada ay leedahay aqoontooda si loo hagaajiyo siyaasadaha magaalooyinka.
Qiimaha dhulku aad ayuu u kala duwanyahay dhammaan gobolka, iyo sidoo kale hawlaha suuqyadaa, hase yeeshee, ma jiro bangi macluumaad ah oo ku saabsan mawduucyadan, daba galka, xuduudaha gobolka iyo helitaanka lacag la'aanta ah ee taageeraya hawsha qorshayaasha magaalooyinka iyo helitaanka daraasado barbardhac ah.
Mashruucu wuxuu leeyahay sidan Ujeedada dhexe ee dhismaha khariidada qiimaha tixraaca ee magaalooyinka magaalooyinka Latin America iyo Kariibiyaanka iyada oo ku saleysan xogta ay soo ururiyeen mutadawiciin ahaan qaabka weyn ee bilaashka ah, bilaashka ah iyo furan (baddsourcing). Diiwaangelinta iyo nidaaminta xogta waxaa lagu qaban doonaa mashruuc GIS ah ee daruurta.
Martiqaadka waxaa lagu hagaajiyaa xirfadlayaasha, aqoonyahanka iyo saraakiisha dawladda ee la xidhiidha siyaasadaha dhulka, waxayna soconaysaa ilaa 31 bisha Maarso. Tabaruciintu waxay u muuqanayaan inay yihiin wada-shaqeenta iyo tixraacyada magaalada labadaba bogga internetka iyo warbixinnada la daabacay, waxayna heli doonaan macluumaadka of qiimaha ciidda soo saaray.
"5 xogta magaaladaada"! Taasi waa sheekada wicitaanka. Ka qaybqaadashadu waa mid sahlan, waxay u baahan tahay waxtarka ugu yar ee xogta 5 (dhibcaha khariidada) qiimayaasha hadda ee magaalada ee la daraaseeyay.
Xogta noocee ah ayaa la filayaa in la ururiyo
Xogta wax ku biirinta
Waxaa la filayaa 5 xogta qiimaha magaalada; Haddii aad wax badan ku kordhin karto, waxay noqon doontaa mid aad u fiican waxayna u sahlaysaa helitaanka macluumaad tayo fiican leh.
Doono guryaha iibka ah, ehelada, asxaabta, xaafadda, wargeysyada, bogagga internetka ama joornaalada khaas ah ee loo tixgelinayo tayada; Waxaad sidoo kale la tashan kartaa xirfadlayaasha ku takhasusay qiimeyn gaar ah.
Xaaladaha oo dhan, waa inaad bixisaa xogta laga helo magaalooyinka, qiimaha suuqa ee hadda jira y kaliya dhulka, laga bilaabo badan oo aan la dhejin ama laga soo bilaabo kiisaska qiimaha iyaga laga dhimay.
Macluumad kasta, waxaa la filayaa in ay soo uruuriso macluumaadka soo socda
Goobta: cinwaanka ama qiyaasta goobta, taas oo u oggolaaneysa in si sax ah loogu geliyo khariidada.
Qiimaha dhulka korkiisa, mitirka labajibbaaranaha iyo doolar.
Adeegyada la heli karo Waxa uu dooran doonaa mid ka mid ah fursadaha soo socda: biyo 1- iyo korontada, biyaha 2-, korontada iyo dhul sallax 3- ama aan lahayn adeegyada.
Qadarka Lot ayaa la falanqeeyay. mid ka mid ah fursadaha soo socda la dooran doona: 1- m1.000 ka yar 2, 2 iyo 1.000 5.000- dhexeeya m2, 3- dhexeeya 5.000 iyo 10.000 2- m4 ama ka badan 10.000 m2 weyn.
Ilaha macluumaadka. mid ka mid ah fursadaha soo socda la dooran doona: sale 1-, 2- qiimaynta / gaar ahaan ku qiimaysay, dalab 3- wargeliyay by offeror ah, ama 4- 5- dalab daabacay warbixin ay bixiyaan xog u qalma.
Daaqada wuxuu muujinayaa horumarka Khariidadda qiimaha ee GIS Cloud
Post Previous«Previous Akadamiyadda Internetka ee Soodhawaynta Macluumaadka Juquraafi
Post Next 10 sano ka dib u haajiraan boosteejo ah oo geospatial - Microstation Geographics - Oracle astaantaNext »
3 Jawaab ah "Mashruuca Mapping Values ​​Land in Latin America iyo Kariibiyaanka"
Sergio Sosa Quilaleo isagu wuxuu leeyahay:
Waannu ku faraxsannahay xiisaha mashruuca!
Wicitaanku waa dhamaan dadka Latin America ah, sidaas darteed dhammaan xogta Buenos Aires ee aad wax ku biirin karto waa la soo dhaweynayaa.
Ka qaybqaadashadu waa sahlan tahay! Waxaad gali kartaa blog-ka mashruuca: http://valorsueloamericalatina.org/como-participar/
Haddii aad qabtid su'aalo, waan kugu hanuunin karaa! U soo wargeli e-mail: valoresinmobiliariosal@gmail.com
Si qadarin leh
Marka hore, waxaa jira fursado Buenos Aires, iyo labaadna waxaa ku jira taageero farsamo.